Akụkọ - Ihe dị iche nke DDP, DDU, DAP
Ihe dị iche nke DDP, DDU, DAP
Okwu ahia abụọ DDP na DDU na-ejikarị eme ihe na mbubata na mbupụ nke ngwaahịa, na ọtụtụ ndị na-ebupụ ahịa na-enweghị nghọta miri emi banyere usoro azụmahịa ndị a, ya mere ha na-ezutekarị ụfọdụ ihe na-enweghị isi na usoro mbupụ ngwaahịa. nsogbu.
Yabụ, kedu ihe DDP na DDU, kedụkwa ndịiche dị n'etiti okwu ahia abụọ a? Taa, anyị ga-enye gị nkọwa zuru ezu.
Kedu ihe bụ DDU?
DDU si bekee bu “Eweputara oru a na akwughi”, ya bu “Ebube Oru Niile a na-akwụghị ụgwọ (ebe akara aka)”.
Kinddị ahia a pụtara na na ọrụ ọrụ, onye na-ebupụ ya na onye na-ebubata ya na-ebuga ngwongwo ahụ n'otu ebe na mba mbubata, nke onye na-ebupụ ya ga-eburu ụgwọ niile na ihe egwu dị na ngwongwo a na-ebute ebe a, mana agunyeghi ihichapu omenala na ụtụ isi na ọdụ ụgbọ mmiri.
Mana ọ dị mkpa iburu n’obi na nke a anaghị agụnye ụtụ ahịa kọstọm, ụtụ isi na ụgwọ ndị ọzọ gọọmentị kwesịrị ịkwụ mgbe a na-ebubata ngwa ahịa ahụ. Ndị na-ebubata ngwaahịa kwesịrị ịnagide ụgwọ ndị ọzọ na ihe ọghọm kpatara site na enweghị ike ijikwa usoro nnabata ngwa ahịa nke ngwaahịa na ngwa ngwa.
Kedu ihe bụ DDP?
Aha Bekee nke DDP bụ "Nyefee Ọrụ Akwụ ”gwọ", nke pụtara "ivekwụ Dgwọ Ọrụ (ebe a họpụtara)". Usoro nnyefe a pụtara na onye na-ebupụ ahịa ga-emezigharị usoro nnabata omenala mbubata na ebe onye mbubata na onye na-ere ahịa wepụtara tupu ọ gaa. Nyefee onye mbubata ngwongwo ahụ.
N’okpuru ahia a, onye na-ebupụ ahịa kwesịrị ibute nsogbu niile dị n’ibuga ngwongwo ahụ gaa ebe ahọpụtara, ọ dịkwa mkpa ịgafe usoro nnabata ndị ahịa n’ọdụ ụgbọ mmiri na-aga, ma kwụọ ụtụ isi, na-ejikwa ụgwọ na mmefu ndị ọzọ.
Enwere ike ịsị na n'okpuru okwu azụmaahịa a, ọrụ onye na-ere ahịa kachasị.
Ọ bụrụ na ndị na-ere ere enweghị ike ịnweta ikikere mbubata ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi, mgbe ahụ ekwesịrị iji nlezianya jiri okwu a mee ihe.
Kedu ihe dị iche n'etiti DDU na DDP?
Nnukwu ihe dị iche n'etiti DDU na DDP dị n'okwu banyere onye na-ebu ihe ọghọm na ụgwọ nke ngwongwo n'oge usoro nnabata ndị ahịa na ọdụ ụgbọ mmiri.
Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa ahụ nwere ike mezue nkwupụta mbubata, ị nwere ike ịhọrọ DDP. Ọ bụrụ na onye na-ebupụ ya enweghị ike ijikwa ihe metụtara ya, ma ọ bụ na ọ chọghị ịgafe usoro mbubata, buru ihe egwu na ụgwọ, mgbe ahụ ekwesịrị iji okwu DDU.
Ihe a dị n'elu bụ iwebata ụfọdụ nkọwapụta dị mkpa na ndịiche dị n'etiti DDU na DDP. N'ime usoro ọrụ ọrụ, ndị na-ebupụ ahịa ga-ahọrọ usoro azụmaahịa dabara adaba dịka mkpa ọrụ ha si dị, ka ha nwee ike ịkwado ọrụ ha. Mmecha ahụ zuru.
Ihe dị iche n'etiti DAP na DDU
DAP (nyefere na ebe) usoro nnyefe njedebe (gbakwunye ebe a kapịrị ọnụ) ọ bụ okwu ọhụrụ na Iwu General 2010, DDU bụ okwu na Iwu 2000 General, na enweghị DDU na 2010.
Usoro nke DAP dị ka ndị a: nnyefe na ebe. Okwu a metụtara otu ma ọ bụ karịa n'ụzọ njem ọ bụla. Ọ pụtara na mgbe a ga-ebuputa ngwongwo ndị a ga-ebutu na ngwa ngwa njem na-abata n'aka onye zụrụ ha na ebe a kara aka, ọ bụ nnyefe nke onye na-ere ahịa, ndị na-ere ahịa na-eburu ngwongwo ahụ maka ihe ize ndụ niile nke ala ahụ.
Ọ kachasị mma maka ndị ọzọ ịkọwapụta ebe dị n'ime ebe a kwadoro, n'ihi na onye na-ere ya na-ebute ihe ize ndụ na ọnọdụ ahụ.
Post oge: Jun-09-2021